पार्टी नीति सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ : डा. वंशीधर मिश्र » छलफल
पार्टी नीति सिद्धान्तमा चल्नुपर्छ : डा. वंशीधर मिश्र
डा. वंशीधर मिश्र, नेता नेकपा
हालै सम्पन्न एसिया प्यासेफिक समिटका बारेमा हालका प्रधानमन्त्री र नेकपाका वरिष्ठ नेतालाई जोडेर केही मिडिया र केही बुद्धिजीवीले बदनाम गर्न खोजेका छन्, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
विरोध गर्ने केही मुद्दा नपाएर नकरात्मक मुद्दा बनाउने यो कुसंस्कारले ग्रस्त प्रचारबाजी हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ । नत्र यो समिट ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसमा जुन कुरा एउटा धर्मको बारेमा उठाइएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यो कार्यक्रममा भारतीय जनता पार्टीका कट्टरवादी हिन्दु नेता विजय ज्योतिले स्वागत भाषण गरेर सबैभन्दा बढी दोषि भनेर प्रचार गरिएकी मदन मुनलाई मुरिमुरी प्रशंसा गरेका छन् । त्यो कुरा गलत प्रचार गर्ने मिडियाका पत्रकारहरूले सुनेका होलान् । त्यसैगरी नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी म्यान्मारकी स्टेट काउन्सिल आङसाङ सुकी आएकी छिन्, उनले स्वागत गरेकी छिन् । ३२ वर्षदेखि निरन्तर लडेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको कम्बोडियाका हुसेन आएका छन् । अन्य सानासाना देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुखहरू आएर सहभागी भएका छन् । कतिपय देशका राजनीतिक पार्टीका नेता र नेपालका पनि थुप्रै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सहभागी भएका छन् । यस्को उद्देश्य नै शान्तिका लागि भएकोले कार्यक्रमले शान्ति, समृद्धि र पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । ४० भन्दा बढी देशका महत्वपूर्ण पाहुनाहरू सहभागी भएर नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा बुझ्ने र त्यसलाई विश्व समुदायमाझ पु¥याउन महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ । त्यसैले सबै कुरामा फाईदै फाईदा भएको उक्त कार्यक्रमलाई विवादित बनाउन खोज्नु, गलत सन्देश दिन खोज्नु नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सुरुदेखि अन्त्यसम्म महत्वपूर्ण योगदन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता र हालका प्रधानमन्त्रीका बारेमा गलत प्रचार गर्नु राजनीतिक पाखण्ड र डाहाबाहेक केही होइन । यस्ता आधारहीन, तथ्यहीन, गलत प्रचारको कुनै अर्थ छैन । यसको म र मेरो पार्टीको तर्फबाट खण्डन र भत्र्सना गर्दछु । हाम्रा हालका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमाथि तथ्यहीन आरोप लगाउनु भनेको आकाशतिर फर्किएर थुक्नु र आफ्नै अनुहारमा पार्नुजस्तै हो । उनीहरूका कुरा कसैले नपत्याउन र भ्रमित नहुन पनि तपार्इंंको लोकप्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत आग्रह गर्दछु ।
यसमा केही मिडिया र केही बुद्धिजीवीहरू मात्रै लाग्नुको पछाडिको अर्थ के होला ?
पहिलो, त केही निहित स्वार्थ बोकेका पात्र र प्रवृत्तिहरूले नेपालमा राम्रो काम हुन थालेको, जनताले सुख पाउन लागेको मन नपराउने डाहा गर्ने, सकरात्मक सोच र कामभन्दा नकरात्मक सोच र काममा बढी रमाउने, जनतालाई आशामा भन्दा निराशामा धकेल्ने र तुष्टि लिने, गलत प्रचार गर्ने र समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरिरहेका छन् । यो त्यसैको प्रमाण हो र त्यो मौलाउँदो छ । दोस्रो, अहिले मुलुकमा दुई तिहाईनजिकको ऐतिहासिक स्थिर वामपन्थी सरकार छ, जसले मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउँछु भनेर अघि बढिरहेको छ, त्यसलाई कमजोर पार्ने, मनोबल गिराउने, मुलुक र जनताको हितमा काम गर्न नदिने र बदनाम गर्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको षड्यन्त्र हो । यिनीहरूले विभिन्न बहाना र स्वरूपमा भित्र छिरेर पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई बद्नाम गर्ने, आक्रमण गर्ने, नकरात्मक प्रचारप्रसार गर्न लगाउने काम गर्छन् । त्यो अर्को पुष्टि हो यो समिट । तेस्रो, वामपन्थी सरकार नचाहने, देश समृद्ध भएको देख्न नचाहने, धर्मको नाममा मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वमा फँसाउन चाहने, विकास र समृद्धि हुन नदिने र त्यसमार्फत आफू खेलिरहने अनि विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्ने देशी विदेशी पड्यन्त्रकारीको निहित स्वार्थ यसमा देखिन्छ किनभने अहिलेको हाम्रो संविधानले जातीय द्वन्द्वको अन्त्य गरी सबैलाई समान रूपमा अवसर प्रदान गरेको छ । शान्ति र समृद्धिलाई मूल लक्ष्य बनाएको छ, संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा लगेको छ । आफ्ना जनप्रतिनिधिद्वारा जनताले चुन्ने र चुनिने प्रणालीको जग बसाएको छ । भेदभाव र सानो ठूलोको अन्त्य गरेको छ । चाहेको धर्म मान्न पाउने, कसैको धर्ममा हमला गर्न नपाउने, जबर्जस्ती धर्म परिर्वतन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संविधानमार्फत सुरक्षित र बलियो बनाएको छ । यस प्रकारका काम कुरालाई यस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरूले मन पराएका छैनन् । त्यो कुरा यो समिटमार्फत प्रकट भएको छ । त्यस्ता प्रवृत्तिहरूको रोदन केही मिडिया र बुद्धिजीवीमार्फत प्रकट भएको हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण म पनि त्यो समिटमा थिएँ । उद्घाटनपश्चात म बाहिर निस्किएको थिएँ, मलाई टिभिका दुईजना पत्रकारले यसको सपथ गराउने कार्यक्रम कति बेला हुन्छ, तपार्इंं जानुहुन्छ भनेर सोधे । मैले भने तपार्इंहरू विज्ञ पत्रकार हुनुहुन्छ तपार्इंहरूलाई त सबै थाहा हुन्छ, यसैमा लागिरहनु भएको छ, लौ मलाई बताउनुस् त के के हुन्छ, कतिबेला हुन्छ, को को आउनुहुन्छ तपार्इंंहरूले त यहाँ सबै धर्मका सबैलाई देख्नु भयो भनेर भने उहाँहरू कालोनीलो भएर नाजवाफ हुँदै हिड्नु भयो । यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरू जनतालाई भ्रमित पार्न घुसपैठ भएका छन्, गलत प्रचारमा लागेका छन् ।
तपाइले भनेजस्तै केही दैनिक र केही टिभिका मालिक, केही पत्रकारहरू व्यक्तिगत गलत प्रचारमा लागेको देखियो । यसमा पनि बढी प्रहार माधवकुमार नेपाललाई गरिएको देखियो, युनिफिकेसन चर्चमा २२ वर्षदेखि स्वार्थवस संलग्न भएको रिपोर्ट नै प्रसारण भएको छ, यो के हो ?
मैले पनि यस्तो सुनेको छु, जुन तथ्यहीन रिपोर्टसहित गलत प्रचार ग¥यो, त्यस मिडियामाथि मुद्दा हाल्नु पर्छ । जथाभावी गलत प्रचार गर्ने ती मिडियालाई म चुनौती पनि दिन चाहन्छु कि, त्यो पुष्टि हुने तथ्य, सत्य प्रमाण पेस गर्न । साथै यस बारेमा त्यस्ता मिडियामाथि सरकारले पनि समाचरको पुष्टि हुने प्रमाण माग गर्नुपर्छ । पुष्टि गर्न नसके कारबाही गर्नुपर्छ । किनकी माधवकुमार नेपाल व्यक्ति होइन, सस्था हो, पूर्वप्रधानमन्त्री हो, नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको, नेकपालाई यहाँसम्म ल्याउन जीवन बलिदान गरेको, संघर्ष गरेको सिङ्गो जीवन राजनीतिक दाउमा लगाएको व्यक्तित्व हो । उहाँ पनि तीन करोड नेपालीको नेता हो । उहाँ हिन्दुको कार्यक्रममा पनि जानुहुन्छ बृद्धिष्टको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुुनुहुन्छ, मुस्लिम र क्रिष्चियनको कार्यक्रममा पनि जानुहुन्छ, कृष्ण प्रणामीको कार्यक्रममा पनि जानुहुन्छ, इस्लाम धर्मालम्वीको कार्यक्रममा पनि जानुहुन्छ । अर्थात जनताले बोलाएका सबै ठाउँका कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ । देशका मुर्धन्य नेताहरू यस्ता सबै कार्यक्रममा जान्छन्, जानुपर्छ । नजाँदा व्यक्तिको व्यक्तिका अधिकार हनन भएको ठहर्छ । त्यसैले त्यस्ता कार्यक्रममा जान कुनै रोकटोक वा प्रतिबन्ध छैन । तर, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार जनताको कार्यक्रममा जाँदा, देशको हितमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदा हाम्रा वरिष्ठ नेतामाथि जुनखालको गम्भीर आरोप लगाइएको छ, गलत प्रचार गरेर रिपोर्ट बजाइएको छ, त्यो गम्भीर आरोप हो । यसमा हाम्रो पार्टीको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । केही द्वारा सञ्चालित यस्ता अपराधीहरूलाई मेरो ठाडो चुनौती छ कि प्रमाण ल्याएर तत्थ पुष्टि गर कि सजायको भागीदार बन्न तयार होऊ भन्ने कुरा तपार्इंको यो लोकप्रिय मिडियामार्फत सुनाउन चाहान्छु । साथै, यस्ता गलत र तथ् हीन भ्रमित समाचार र रिपोर्टको पछाडि नलाग्न सबैमा आग्रह गर्न
चाहन्छु । यस्ता रिपोर्ट बनाउने शक्तिको व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्नेहरू जनताका दुस्मन र अपराधी हुन् । यस्तामाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग जोड्दार माग पनि गर्न चाहन्छु ।
यो समिटका बारेमा त तपार्इंकै पार्टीभित्रका केही नेताले पनि आयोजक र सरकारप्रति प्रश्न उठाएका छन्, यो बुझेर वा नबुझेर हो पार्टीको धाराणा के छ ?
यसमा पार्टीको कुनै धाराणा छैन किनकी पार्टीको सचिवालयबाहेक अरू कुनै बैठक नै बसेको छैन । यो पत्रिका प्रकाशित हुने अघिल्लो दिन स्थायी कमिटी बस्नेछ । त्यसमा केही धारणा आउला तर अहिले कुनै धारणा बाहिर आएको छैन । जहाँसम्म पार्टीको केही नेताले प्रश्न उठाएको कुरा गर्नु भयो त्यहाँ उहाँहरूले दुईवटा कोणबाट उठाउनु भएको छ । एउटा यो समिट गरिरहँदा यसमा लाग्ने खर्चबर्च कहाँबाट आयो, कसले दियो, कति खर्च भयो त्यसको जानकारी हुनुप¥यो, पारदर्शिता हुुनुप¥यो भन्ने कोणबाट आएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । यसलाई मैले पनि सकरात्मक रूपमै लिएको छु । यस्ता कार्यक्रम हुँदा पारदर्शी नै हुनुपर्छ । यो कुरा आयोजकले बुझाएका होलान् वा बुझाउने नै छन् । अर्को, कतिपय प्रभावशाली र मुर्धन्य नेताहरूलाई निम्ता छुट्यो । त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई नछुटाएको भए हुन्थ्यो । त्यसमा के कसो भएर, निम्ता पठाउन बिर्सिएर पनि हुन सक्छ, सबैलाई समेट्न नसक्दा र समान हैसितयका केही नेता समिटमा सहभागी हुने, कसैले हेरेर बस्नु पर्दा उहाँहरूको मनमा चित्त दुख्न सक्छ । त्यसमा स्पष्ट गर्न भन्नु भएको होला । त्यो जायज कुरा हो । सूचनाको ग्यापले यस्ता कुरा आउने, प्रश्न उठ्ने समिटमा बस्नैपर्ने व्यक्तित्व छुट्ने भएको छ । यसलाई आउँदा दिनमा सच्याउनु पर्छ । यस्ता विषयमा आयोजकको ध्यान पुग्नु पर्छ । त्यसको केही कमी भएर यस्ता प्रश्न उठेका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ, जो जायज प्रश्न हो ।
त्यसो भए यो सम्पन्न समिटको बारेमा वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मात्र बढी प्रहार गर्नुमा निहित स्वार्थ छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, यसमा निहित स्वार्थ र कुत्सित षड्यन्त्र छ र यसमा त्यस्तै मान्छेहरू लागेका छन् । जो मैले माथि नै भनिसकेँ । यसको सशक्त विरोध र भण्डाफोर गर्नुपर्छ । तपार्इंको मिडियामार्फत पनि त्यस्ताहरूको जोडदार भत्र्सना गर्दछु ।
कांग्रेसदेखि विभिन्न पार्टीका नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पहिलेदेखि नै सहभागी भएर आएको यो कार्यक्रम नेकपाका अध्यक्ष हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहभागी हुँदा यसपटक उहाँहरूलाई चौतर्फी आक्रमण भयो तर तपार्इंको शक्तिशाली पार्टी सामूहिक प्रतिरक्षामा उत्रिएन किन ?
साहै महत्वपूर्र्ण प्रश्न गनुभयो, हो यो धेरै कुरामा देखिएको छ, मलाई पनि खड्किएको छ । पार्टी पनि शत्तिसाली छ, सरकार पनि हाम्रै छ । लाखौ नेता कार्यकर्ता भएको पार्टी जस्ले मुलुकलाई नै जुरूक्कै बनाउ सक्छ, हाम्रो संगठन माथिदेखि गाउँगाउँमा छ, तर यस्तो अवस्थामा पार्टीको बैठक नहुने, यस्ता विषयमा पार्टीले जोड्दार रूपमा प्रतिवाद नगरेकोमा असन्तुष्टि र प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् । यस्ता विषयमा पार्टीले ध्यान दिनै पर्छ । तर, यसमा मलाई के लाग्छ भने हाम्रा दुईवटा पार्टी मिलेर यसको सबै कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरूको समायोजन भइसकेको हुनाले मिलाउनु पर्ने, बनाउनु पर्ने कुरा थुप्रै भएकोले ठीक समयमा संगठन, जनसंगठनको समायोजन नहुँदा, पार्टी कमिटीको र नेताहरूको कार्यविभाजन नहुँदा, कहाँ कस्ले यस्ता कुराको निर्णय गर्ने भन्ने विषयको निरुपण नहुँदा, स्थायी समितिदेखि पार्टीका अन्य समितिहरूको बैठक समयमा नहुँदा, यस्ता समस्याको समाधान गर्न अप्ठेरो भएको हो । सिङ्गो पार्टी परिचालन हुने पार्टीका निर्देशनहरू तलसम्म पु¥याउने कुरामा समस्या भएर यस्तो समस्या भएको हो । अहिले बल्लतल्ल प्रदेश कमिटी बनेको छ, केन्द्रीय, स्थायी र सचिवालयबाहेक अन्य कमिटीहरू बनेका छैनन् । बैठक भेलाहरू हुन सकेको छै्रन । यस्तै कारणले तपार्इंले भनेको कुरामा प्रतिरक्षा हुन, खण्डन मण्डन गर्न, संस्थागत निर्णय गर्न समस्या भएको हो । यसलाई चाँडै हल गर्न पार्टीका वरिष्ठ नेता र स्थायी कमिटी लागिरहेको छ । यसतर्फ सबै सचेत भएर यसको अन्त्य चाँडै हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु ।
अहिले कुनै समस्या आइप¥यो भने त तपार्इंको पार्टीले १ हजार जति मास पनि संगठित रूपले उपस्थित गराउन नसक्नेजस्तो देखियो नि ?
होइन, त्यस्तो अवस्था कहिले आउने पनि छैन, आएको पनि छैन । तर, त्यस्तो प¥यो, जनता जुटाउनु प¥यो, कार्यकर्ता भेला गर्नु प¥यो भने त हाम्रो पार्टीले १ घण्टाको बीचमा लाखौं जनता तयार पार्न सक्छ किनकी हाम्रो पार्टी हिजोदेखि नै तलतल पुगेकै छ, पार्टी अहिले पनि गाउँगाउँमा छ, हिजोको पार्टी च्यानल अहिले पनि छ । हाम्रो सचिवालय छ, स्थायी समिति छ, केन्द्रीय समिति छ, प्रदेश समितिहरू छन् । त्यसमार्फत हिजोकै कमिटीहरू अहिले पनि क्रियाशील छन् । सचिवालय वा स्थायी कमिटीले मात्रै निर्णय ग¥यो भने पार्टीले लाखौं जनता उतार्न सक्छ । त्यसमा समस्या छैन । तर केही तल्ला कमिटीहरू जनवर्गीय संगठनहरूको समायोजन प्रक्रिया पूरा गर्न र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न केही ढिलाइ भएको छ । सबैलाई उचित जिम्मेवारी पुगोस्, न्यायोचित बनोस् भन्दा केही ढिला भएको छ । कतिपय अवस्थामा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको व्यस्तताले गर्दा पनि समयमा काम हुन सकिरहेको छैन । यसमा नेताहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले पनि ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । अब तालमेल मिलाएर यो ढिलाइलाई चाँडो तिर लानुपर्छ । अहिले यसले गति समातिसकेको हुनाले अब चाँडै यो काम पूरा हुन्छ । स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भएकोले त्यसले यो विषय टुङ्ग्याउने छ । मलाई आशा छ तपार्इंको पत्रिका प्रकाशन हुँदा यो समस्याको हल हुनेछ ।
प्रदेश कमिटी बनेको छ, कतिको असन्तुष्टि छ ?
असन्तुष्टि त छ तर थोरै छ, असर नै गर्ने खालको छैन । आन्तरिक लोकतन्त्र भएको पार्टीमा यस्तो हुन्छ । तर त्यो पार्टीभित्रैबाट समाधान हुन्छ । नमिलेका कुराहरू वरिष्ठ नेताहरू बसेर मिलाउनु हुन्छ, मिल्छ । महत्वपूर्ण नेता कोही छुट्नु भएको छ भने जिम्मेवारीमा आउनुहुन्छ । त्यस्तो खासै समस्या छैन ।
यसको मतलब, नेकपाको सरकारले काम गर्न सकेन, पार्टीमा मारामार छ, काममा परिणाम निकाल्न सकेन भन्ने कुरा सही हो ?
त्यो पूरै असत्य होइन, हामीले चाहेजति, जनताले सोचेजति काम भएका छैनन् । कतिपय कामका परिणाम पनि आएका छैनन् आउन बाँकी छन् । यसमा पार्टी सरकार पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैन तर विरोधीले भनेजस्तो काम नै नभएको, कामै नगरेको भन्ने चाँहि होइन, यो चाँहि आरोप हो । सरकारले काम गर्दैछ, गरिरहेको छ, ऐन कानुन बनाइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गरेको छ, जीरोबाट काम थालेर डबल डिजिटमा पु¥याइसकेको छ । अब ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने कोर्समा छ । जुन धेरै माथि पुगिसकेको छ । कांग्रेसले लथालिङ्ग र भताभुङ्ग पारेको मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो पार्दैछ । हिजोका विकृति, विसंगतिहरू समाप्त पार्न लागेको छ । मान्छेका मनस्थितिहरू परिवर्तन गर्दैछ । यी सबै कुराहरू गर्न समय लाग्छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि गर्दैछ, कर्मचारी चलाउने संयन्त्र, ऐन कानुन पनि बनाउँदैछ । कर्मचारी समायोजनको महत्वपूर्ण काम कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयक राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएर आइसकेको छ । अब कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल हुनेछ । मुलुकमा विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाइरहेको छ । पार्टीका काम पनि हुँदै गइरहेका छन् । अब चाँडै पार्टी कमिटीहरू र जनवर्गीय संगठनहरू बनिसक्नेछन्, सबैले जिम्मेवारी पाउनेछन्, गाउँगाउँमा पार्टी च्यानल पुग्नेछ । कामहरू हुनेछन्, नराम्रा कामहरू हटाउने छांैं, राम्रा कामहरू गर्नेछौं । त्यसमा सरकारलाई अगाडि बढाउन पार्टीको सिङ्गो पंक्ति लाग्नेछ । जनताका काम र बाचा पुरा हुनेछन्, मुलुक समृद्ध हुनेछ । यसमा कर्मचारीतन्त्रले पनि जुरूक्कै उठेर सहयोग गर्नेछ । यसमा सबै आशावादी बन्न र निराशा हटाउन म आग्रह गर्दछु ।